INONA NY ATAO HOE FIFOHAZAM-PANAHY | Madagascar features website
Ny fifohazana dia asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny olona iray izay mahatonga azy hahatsiaro fa mpanota.
Amin' izany dia miteraka alahelo ao anatiny ny Fanahy Masina, miantso azy hiverina ho amin' Andriamanitra, ka hibebaka ary handray ny avotra dia ny fisoloana nataon'i Jesosy Kristy ho azy, izay hahamarina azy eo amin'ny fitsarana; ka hahazoany miditra any an-danitra.
Voalaza ao amin'ny Soratra Masina (1Ja:1:8) fa ny olombelona rehetra dia mpanota avokoa, tsy misy marina na dia iray aza. Na dia ny efa kristiana aza dia mbola manohitra an' Andriamanitra, manao izay tsy tokony hatao ary tsy manao izay ampanaovin' ny Tompo azy.
Maro ny olona mazoto mivavaka sady manao adidy, nefa tsy mahatsapa akory fa tokony hibebaka.
Ny hitady sy hamonjy ny very anefa no anton-dian'i Jesosy tety an-tany, koa dia miasa mafy ny Fanahy Masina hampody ireo zanaka adala ireo.
Miantso Izy, mibitsika, mampieritreritra ary mikapoka ihany koa, mba hahatonga ny olona handray fanapahan-kevitra ka hanaiky hampihavanina amin’ Andriamanitra sy handray izay atolotr’ i Jesosy azy, dia ny Famonjena.
Izay olona mihaino Azy ka mibebaka marina tokoa dia:
- Omen’ Andriamanitra famelan-keloka
- Amboleny finoana ao anatiny (satria tsy misy olona mahay mino raha amin’ny herin’ny tenany ihany, araka ny artikola)
- Velominy amin’ny tenin’ Andriamanitra sy ny Sakramenta
- Omeny fo vaovao izay mankahala ny ratsy ary tsy te-hiverina intsony amin’izay efa naloany
- Atsangany ho vavolombelona izay handresy lahatra ny hafa koa mba hiova fo…
Fa izay mandà kosa dia ho very; satria fahafatesana no tambin’ny ota.
Andriamanitra anefa dia tsy mankasitraka ny hahafatesan’ny mpanota, satria olona noforoniny sady karakarainy isan’ andro ireny.
Koa dia mitaona anao izay mamaky ity amim-pitiavana ny Tompo, mba hibebaka; fa io no hany fomba ahafahana manatona an’ Andriamanitra.
Na ota inona, na ota inona, rehefa ibebahanao marina tokoa dia voavelany, satria Izy dia mahatoky amin’ny teny izay nomeny, ary tsy mitsoaka ny fanekeny (Isaia:44:22).